1 Ihe E Mere 27 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
1 Ihe E Mere 27:1-34
27 Ma ụmụ Izrel, dị ka ọnụ ọgụgụ ha si dị, ya bụ, ndị isi ọnụmara+ dị iche iche na ndị isi+ nke otu puku otu puku ndị agha na otu narị otu narị+ ndị agha na ndị isi ọrụ ha bụ́ ndị na-ejere eze ozi+ n’okwu ọ bụla metụtara ìgwè dị iche iche bụ́ ndị na-abata ma na-apụ kwa ọnwa, n’ọnwa niile n’afọ, ìgwè nke ọ bụla dị puku mmadụ iri abụọ na puku anọ. 2 Onyeisi ìgwè nke mbụ, maka ọnwa nke mbụ, bụ Jashobiam+ nwa Zabdiel, e nwere puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè nke ya. 3 Ụfọdụ n’ime ụmụ Pirez,+ bụ́ ndị ndú nke ndị isi niile nke ìgwè dị iche iche ndị na-eje ozi, nwe ọnwa nke mbụ. 4 Onyeisi nke ìgwè nwe ọnwa nke abụọ bụ Dodaị,+ onye si n’agbụrụ Ahohaị,+ ya na ìgwè nke ya. Miklọt bụ onye ndú ha, e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè nke ya. 5 Onyeisi ìgwè nke atọ nke na-eje ozi, nke nwe ọnwa nke atọ, bụ Benaya+ nwa Jehoyada+ onyeisi nchụàjà. E nwere puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 6 Benaya+ a bụ dike n’ime mmadụ iri atọ ahụ,+ bụrụkwa onyeisi mmadụ iri atọ ahụ; Amịzabad nwa ya bụkwa onyeisi ìgwè ya. 7 Onye nke anọ, nke nwe ọnwa nke anọ, bụ Asahel+ nwanne Joab,+ Zebadaya nwa ya na-esotekwa ya, e nwere puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 8 Onyeisi nke ise, nke nwe ọnwa nke ise, bụ Shamhọt+ onye si n’agbụrụ Izra, e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 9 Onye nke isii, nke nwe ọnwa nke isii, bụ Aịra+ nwa Ikesh,+ onye Tekoa,+ e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 10 Onye nke asaa, nke nwe ọnwa nke asaa, bụ Hilez+ onye Pelọnaịt,+ bụ́ onye si n’ebo Ifrem, e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 11 Onye nke asatọ, nke nwe ọnwa nke asatọ, bụ Sibekaị+ onye Husha nke si n’agbụrụ Zira,+ e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 12 Onye nke itoolu, nke nwe ọnwa nke itoolu, bụ Abi-iza+ onye Anatọt+ nke si n’ebo Benjamin, e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 13 Onye nke iri, nke nwe ọnwa nke iri, bụ Meharaị+ onye Netofa nke si n’agbụrụ Zira,+ e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 14 Onye nke iri na otu, nke nwe ọnwa nke iri na otu, bụ Benaya+ onye Piratọn bụ́ onye si n’ebo Ifrem,+ e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 15 Onye nke iri na abụọ, nke nwe ọnwa nke iri na abụọ, bụ Heldaị+ onye Netofa nke si n’agbụrụ Ọtniel, e nwekwara puku mmadụ iri abụọ na puku anọ n’ìgwè ya. 16 A bịa ná ndị isi nke ebo dị iche iche nke Izrel,+ n’ụmụ Ruben, Elịiza nwa Zikraị bụ onye ndú; Shefataya nwa Meaka abụrụ nke ụmụ Simiọn; 17 Hashabaya nwa Kemuel abụrụ nke ụmụ Livaị; Zedọk+ abụrụ nke ụmụ Erọn; 18 Elaịhu,+ otu n’ime ụmụnne Devid,+ abụrụ nke ụmụ Juda; Ọmraị nwa Maịkel abụrụ nke ụmụ Ịsaka; 19 Ishmaya nwa Obedaya abụrụ nke ụmụ Zebulọn; Jerimọt nwa Azriel abụrụ nke ụmụ Naftalaị; 20 Hoshia nwa Azazaya abụrụ nke ụmụ Ifrem; Joel nwa Pedaya abụrụ nke ọkara ebo Manase; 21 Ido nwa Zekaraya abụrụ nke ọkara ebo Manase bi na Gilied; Jaasayel nwa Abna+ abụrụ nke Benjamin; 22 Azarel nwa Jeroham abụrụ nke Dan. Ọ bụ ndị a bụ ndị isi+ nke ebo dị iche iche nke Izrel. 23 Devid agụghị ndị gbara afọ iri abụọ gbadawa ọnụ, n’ihi na Jehova kwere nkwa ime ka Izrel dị ọtụtụ dị ka kpakpando nke eluigwe.+ 24 Joab+ nwa Zeruya malitere ịgụ ha ọnụ, ma ọ gụchaghị ha;+ e wee weso Izrel iwe+ n’ihi nke a, e denyeghịkwa ọnụ ọgụgụ ahụ n’ihe ndekọ nke ihe ndị mere n’ụbọchị Eze Devid. 25 Onye na-elekọta akụ̀ eze+ bụ Azmavet nwa Adiel. Onye na-elekọta akụ̀ ndị dị n’ubi+ nakwa ndị dị n’obodo ukwu+ nakwa n’obodo nta dị iche iche nakwa n’ụlọ elu dị iche iche bụ Jọnatan nwa Ọzaya. 26 Onyeisi nke ndị na-arụ ọrụ n’ubi,+ ndị na-akọ ihe, bụ Ezraị nwa Kilọb. 27 Onye na-ahụ maka ubi vaịn+ bụ Shimiaị onye Rema; onye na-ahụ maka ihe dị n’ubi vaịn maka imepụta mmanya bụ Zabdaị onye Sifmọt. 28 Onye na-elekọta ubi oliv na osisi sịkamọ+ ndị dị na Shefila+ bụ Belhenan onye Gida; onye na-ahụ maka mmanụ+ bụ Joash. 29 Onye na-ahụ maka ìgwè ehi ndị na-ata nri na Sharọn+ bụ Shitraị onye Sharọn; onye na-ahụ maka ìgwè ehi ndị nọ na ndagwurugwu bụ Shefat nwa Adlaị. 30 Onye na-ahụ maka kamel+ bụ Obil onye Ishmel;+ onye na-ahụ maka nne ịnyịnya ibu bụ Jediya onye Merọnọt. 31 Onye na-ahụ maka ìgwè ewu na atụrụ bụ Jeziz onye Hega. Ndị a niile bụ ndị isi na-elekọta ihe niile Eze Devid nwere. 32 Jọnatan,+ nwa nwanne Devid, bụ onye ndụmọdụ, nwoke nwere nghọta,+ ọ bụkwa ya bụ odeakwụkwọ; Jehayel nwa Hakmọnaị+ na ụmụ eze na-anọ.+ 33 Ahitofel+ bụ onye ndụmọdụ+ eze; Hushaị+ onye Akaịt+ bụ enyi eze.+ 34 Ndị na-esote Ahitofel bụ Jehoyada nwa Benaya+ na Abayata;+ Joab+ bụ onyeisi ndị agha eze.
1 Ihe E Mere 27